Global Voices teny Malagasy » Lohalaharana ao Azia i Taiwan Raha Nihemotra Toerana Efatra Kosa i Hong Kong ao Anatin’ny Tondro Momba ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Avrily 2017 7:01 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Taiwan (ROC), Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Sary avy amin'ny tondro 2017 an'ny RSF (Reporters Sans Frontières) ity lahatsoratra ity
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Kris Cheng ary nivoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 26 Aprily 2017. Ny dika eto ambany dia navoakan'ny Global Voices teo ambanini'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Ny mpanaramaso ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety iraisampirenena avy amin'ny RSF dia nampidina toerana efatra an'i Hong Kong tao amin'ny fandaharana nataony tamin'ny tondro manerantany tamin'ity taona ity.
Firenena sy faritra 180 no jerena ao anatin'ilay fampilaharana 2017. Any amin'ny faha-73 i Hong Kong, arahan'i Shina eo amin'ny faha-176. Taiwan, anefa, niakatra toerana enina ka lasa faha-45 – toerana ambony indrindra eo amin'ny samy firenena Aziatika.
Mametraka fanontaniana ilay vondrona raha toa i Hong Kong ka niatrika ny “fanombohan'ny fiafaràn'ilay “firenena tokana, rafitra roa” , fotokevitra narafitr'i Shina hiantohana ny fizakantenan'ilay tanàna.
Niteny i Benjamin Ismaïl, tomponandraikitry ny biraon'ilay ONG any Azia sy Pasifika, fa tsy nitsahatra ireo ohatra nampiseho ny fahasimban'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety tamin'ny 2016. Hoy izy tamin'ny Hong Kong Free Press:
Maro ireo vondrona mpiaro zon'olombelona sy ny fahalalahana maneho hevitra no nanameloka ny fandefasan'ireo mpilaza vaovao ireo fiaikena azo an-terisetra  nataon'ireo mpivarotra bokin'i Hong Kong nosamborina tany Shina.
Nambarany fa notsipihan'ireo mpanaramaso ihany koa ireo fiovàna teo amin'ny matoan-dahatsoratr'ireo trano famoahambaovao sasantsasany toy ny South China Morning Post  amin'ny teny Anglisy, izay nividy ny Alibaba, ilay goavan'ny aterineto Shinoa. Hoy izy nanampy :
Marobe ireo olompirenena ao Hong Kong nifandray taminay nampahafantatra anay ny fisian'ny sivana tamin'ny fanehoankevitr'izy ireo tao amin'ny tranonkala sy ny tsy fisian'ny fanazavana [iray] mazava.
Nohazavainy ihany koa fa noferan'ny governemanta ny fidirana amin'ireo hetsika sy tafa ho an'ny mpanao gazety ataon'ireo famoahambaovao dizitalin'ny fanjakana:
Ny zavamisy hoe ireo media dizitaly toy ny Hong Kong Free Press, raisina ho toy ny ‘media kilasy faharoa’ ary miatrika fanavakavahana amin'ny resaka fanomezana alàlana,  dia mampiseho ihany koa ireo fahasahiranana tsy ahafahan'ireo mpanao gazety tsy miankina hiasa an-kalalahana.
Hetsipanoherana iray tamin'ny 2016 nitakiana ny fiarovana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety. Sary: Hong Kong Free Press.
‘Miely patrana ihany koa ny fanivànan-tena’
Ny fandaharan'ny RSF dia nangonina tamin'ny fampiasàna amin'ny ampahany ny andiam-panontaniana izay nikendrena ireo haino aman-jery matianina, mpisolovava ary mpahay fiarahamonina. Ifantohan'ilay andiam-panontaniana ireo tondro toy ny hamaroana, ny fahaleovantenan'ilay haino aman-jery, ny tontolo iainana ankapobeny sy ny fanivànan-tena, ny rafitry ny lalàna mifehy, ny mangarahara ary ny fotodrafitrasa.
Nasongadin'ilay vondrona manana ny biraony ao Parisy ireo tranga nanjo ireo mpanao gazety sahy miteny ao Hong Kong, toy ireo miasa ho an'ilay gazety Apple Daily, niharan'ny herisetran'ireo nofaritan'izy ireo ho “mpanompon'ny Antoko Kaominista Shinoa.”
Ismaïl nilaza hoe:
Miely patrana ihany koa ny fanivànan-tena, ary ilay tondro dia fitaratra ihany koa ahafantarana ny fomba fahitàn'ireo mpanao gazety ao an-toerana ny atao hoe fahalalahan'ny asa fanaovana gazety […] Nilaza fitomboan'ny tsindry ny ankamaroany, izay miteraka fanivànan-tena iniana atao.
Tany am-piandohan'ny Aprily ny RSF dia nanapaka hevitra ny hanokatra ao Taiwan ny biraony voalohany any Azia, taorian'ny nandàvana an'i Hong Kong noho ireo olana “goavana mitatao” apetrak'i Shina amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety.
Cedric Alviani, talen'ny birao ao Taipei, nilaza fa ilay birao vaovao dia afaka manome tohana misimisy kokoa ho an'ny tolona hisian'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Hong Kong. Nohazavainy ny anton'ilay fanapahankevitry ny vondrona ho an'ny Hong Kong Free Press:
Ao Hong Kong, mety ho ambany fanarahamaso izahay, mety hiharan'ny tsindry avy amin'ny mpitantana. […] Tsy misy na iza na iza tsara antoka 100 isanjato… Saingy ho an'ny birao foibenay izay mandrakotra firenena fito… tsy safidy azo antoka ny fisafidianana an'i Hong Kong.
Heverinay fa azonay atao ny mitondra tohana misimisy kokoa raha tsy tonga dia [miseho] mivantana be.
Nolazain'i Alviani ihany koa fa ny laharana ambony azon'i Taiwan dia mety tsy noho ny fihatsarana hita tato ho ato tao amin'ny faritra, fa noho ny fitontongan'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety manerana izao tontolo izao izay mety nandray anjara tsy mivantana tamin'ny fametrahana an'i Taiwan ho malalaka kokoa.
Notsipihany ihany koa:
Manana olana ihany koa i Taiwan amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta izay manandrana mitsabatsabaka amin'ny asan'ireo trano famoahambaovao an'i fanjakana […] Mbola olan'i Taiwan ihany koa ny fitsabahan'ny tanibe Shina lalindalina kokoa amin'ny matoandahatsoratry ny sasany amin'ireo [vondrona] media tsy miankina.
Na izany aza nofaritany ho “mahafinaritra” ireo fivoarana vao haingana tao Taiwan.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/28/98968/
 fiaikena azo an-terisetra: https://www.hongkongfp.com/2016/06/16/breaking-returned-bookseller-says-he-was-detained-by-a-special-unit-in-china-confession-was-scripted/
 miatrika fanavakavahana amin'ny resaka fanomezana alàlana,: https://www.hongkongfp.com/2017/03/24/just-court-refuses-order-hong-kong-govt-lift-election-day-ban-digital-news-outlets/